Raila odinga oo soo dhaweeyay warbixin kasoo baxday gudiga laba gesodka ah ee ku howlanaa mustaqbalka IEBC – The Voice of Northeastern Kenya
Raila odinga oo soo dhaweeyay warbixin kasoo baxday gudiga laba gesodka ah ee ku howlanaa mustaqbalka IEBC
Hogaamiyaha isbahaysiga mucaradka ugu weyn dalka ee Cord Raila Odinga ayaa si aad ah u soo dhaweeyay warbixinta ay soo diyaarinayaan gudiga laba geesodka ah ee ku howlan mustaqbalka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC.
Odinga ayaa sheegay in xubnahan ay qabtaan shaqo wanagsan waxuuna ugu baaqay Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta in uu isagana taagero warbixintaasi.
Warbixintan ayaa sheegeysa islamarkaana ku talineysaa in 9-ka xubnood ee ugu sare sare gudiga IEBC oo uu hogaaminayo gudoomiyahooda Ahmed Issac Hassan ay xafsiyada baneeyan 30-ka bisha sagaalad ee September si loo soo magacaabo 7 sarkaal oo cusub si ay sida ugu dhaqsiyada badan iskugu diyaariyaan doorashada 2017-ka dalka ka dhaceyso.
Odinga ayaa dhanka kale ugu baaqay Madaxweynaha dalka in ay latashado isaga sidii lagu soo xuli lahaa gudi cusub oo qabto doorashada soo socota.
Dhank kale lacagaha sarkaaladaasi IEBC ee xafsiyada baneenayaa xiliga la siin doono ayaa la sheegay in lasoo shaacin kadib markii warbixintan kasoo baxday gudiyadan laba geesodka ah loo gudbiyo aqalada barlamaanka iyo kan senetka.
Gudoomiyayaasha gudigaasi isku dhafka islamarkaana ka kala socdo isbahaysida jubille iyo Cord oo kala James Orengo oo u matalaya Cord iyo Kiraitu Murungi ayaa waxay sheegen in hadi la badalo gudigan, sarkaalada kale ee lasoo magacaabi doono ay noqon doonaan kuwa dhax dhaxaad ah islamarkaana lagu kalsoonaan doono.
Aqalka barmaanka ayaa shalay gudigaasi sii yay mise ugu daray muddo 2 maalin si ay u soo gudbiyaan warbixintooda oo dhamestiran waxaana lagu wadaa in fadhiga ay xildhibaanda yeelanayaan maalinta khamista ah ee berito loo soo gudbiyo warbixinta.
← Haweeney isku dayday in ay Isbitaalka Garissa ka xado cunug yar oo dhalaan ah oo maxkamada la soo taagay
Dowlada Ingiriiska oo dacwad kusoo ogtay wadaad ay sheegtay in dhalinyarada uu baro falalka xagjirka ah →